Izaphulelo zezindlu ezithengiswayo ngeveki nangenyanga!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJacqueline
IHighlander-Yakhiwe ngo-1917 iseSalina Kansas. Eli khaya lisanda kulungiswa likhaya lakudala lamkela iintsapho ezinkulu kunye namaqela kuwo onke amaxesha. Amagumbi okulala ama-4 (ama-2 kuwo amagumbi okulala amakhulu), iibhafu ezi-3 ezigcweleyo. Kukho indawo eninzi ekhaya yokuchithachitha kunye negumbi elikhulu lokuhlala, lokutyela kunye nekhitshi eliya kuthi kananjalo litsalele amaqela emigewu kwiindibano ezifudumeleyo nezolonwabo. Ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye oh, ikhululekile! Zonke izixhobo ezitsha zombane, ifanitshala, iibhedi, iitawuli, izixhobo zasekhitshini, kunye nezixhobo. Hlala kweli khaya lixhotyiswe ngokupheleleyo "kude" nekhaya ngexabiso elingaphantsi kunexabiso lokuhlala ehotele kwaye ube kwindawo efanelekileyo "kwinto eyenzekayo" eSalina. Yiza wonwabe kwaye Uhlale ixeshana, kuninzi onokukwenza apha ukuze ube nempelaveki ezaliswe LUVUYI! I-Highlander iyafumaneka kwiintsapho ezihamba okwethutyana ukuya eSalina ngomsebenzi, iinkomfa zeshishini leqela, ukuhlala ixesha elide lokuhlangana kosapho, nokuba yintoni na, ukuhlala kweveki nenyanga kwamkelwe kwaye kuthotywe kakhulu, nceda ubuze ngayo nayiphi na imibuzo.
I-Salina iba yenye yezona zinto zinomtsalane e-Kansas yenye yezona projekthi zinkulu kunye nezona zinguqu kwimbali ye-160 yeminyaka ye-Salina isendleleni kwaye ilindele ukudlula i-160 yezigidi zeedola. Kwindawo eyimbali iya kuba nolonwabo olutsha, indawo yokulala, iivenkile kunye neendawo zokutyela ezibandakanya ihotele enemigangatho emihlanu, iziko lokuzonwabisa, imyuziyam yemoto yakudala, indawo yeembaleki kunye nezinye izinto eziluncedo, umtsalane kunye neevenkile ezithengisayo. Yiza ubone ukuba i-hype ingaba yintoni na. ndwendwela salina2020.com
I-Highlander ikwiibhloko ezimbalwa ukusuka kuyo yonke into edweliswe ngezantsi, ndwendwela iiwebhusayithi zabo ukufumana ujongo lwangaphakathi kwimbali kaSalina, iminyhadala emangalisayo yanamhlanje kunye nezayo, yiza ujoyine ulonwabo kubo BONKE!
IYunivesithi yaseKansas Wesleyan- kwwu.edu
Iziko lezeMpilo leNgingqi yaseSalina- srhc.com
I-Smokey Hill River Festival- riverfestival.com
IStiefel Theatre- stiefeltheatre.org
I-Stiefel ibonelela ngezenzo zokhenketho eziphezulu zokuhamba kwaye igcina iSalina Symphony entle.
I-Rolling Hills Zoo kunye neMyuziyam - rollinghillszoo.org
Iziko leMisitho yePizza yeTonys- tonyspizzaeventscenter.com
Ebizwa ngokuba yiNdawo yeNtlanganiso yaseMid-America, iZiko leMicimbi yePizza kaTony libonelela ngombindi weKansas indawo yokuhlangana, ukudlala kunye namava eziganeko eziphucula ukuhlala kunye nokutyelela iSixeko saseSalina.
Eli khaya linika yonke into entsha:
-Igumbi lokulala eliphambili elinebhedi ye-Queen kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo
--2nd kunye ne-3rd amagumbi okulala aneebhedi ze-Queen kwaye abelana ngegumbi lokuhlambela eliphambili.
-Igumbi lokulala le-4 libanzi kwaye libandakanya ibhedi yeNdlovukazi, ibhedi engamawele kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite.
--Indawo yokuhlala evulekileyo kunye nebanzi, indawo yokutyela kunye nekhitshi.
--Ikhitshi litsha kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into efunekayo ukuze kuphekwe ukutya okumnandi kweqela lemigulukudu, ngelixa usapho nabahlobo bethatha inxaxheba kulonwabo olufudumez’ intliziyo.
--3 amagumbi okuhlambela agcweleyo.
--Ukufudumeza okuphakathi kunye nomoya womoya.
--Highland ine Cable TV, WiFi, kunye nenkqubo yokhuseleko ekhaya. (i-alam yakho yabasebenzi kunye nekhowudi yomnyango wokuhlala kwakho kungekho zikhowudi zikhoyo nakubani na).
--Ipatio enkulu kunye negadi yangasemva
--2 iindawo zokupaka kwi-driveway
4.93 ·Izimvo eziyi-28
Umbuki zindwendwe ngu- Jacqueline